South African companies operating in Zimbabwe-winners and losers | The Insider
But of the 20 companies Business Insider identified with important dealings in Zimbabwe, a handful of them – all platinum mining companies – are doing well.
These are the five SA companies worst affected by Zimbabwe’s troubles
Nampak- The packaging company’s profit was cut by almost R3 billion during the year ending September due to the devaluation of the Zimbabwean dollar from 2.54 to 15.20 to the US dollar.
PPC- PPC Zimbabwe reported a one-third decline in volumes, while cement pricing was adjusted weekly due hyperinflation and the Zimbabwean dollar’s severe devaluation. Revenue declined by 54% to R497 million in the six months ending September from R1.076 billion in the prior six months in 2018.
Barloworld-Equipment distributor and automotive company Barloworld’s businesses in Zimbabwe are battling. The two equipment businesses, it has stakes in, are loss-making, and the Zimbabwean currency devaluation has significantly impacted its logistics business.
Pick n Pay- Pick n Pay is feeling the heat in Zimbabwe via its associate TM Supermarkets, which has 58 stores in the country. Pick n Pay’s share of the income of TM fell from R77.8 million in its interim period to 1 September 2018, to an R1.7 million loss for the same half-year in 2019.
Pepkor-In late November, Pepkor decided to exit Zimbabwe due to the macroeconomic challenges. For the year ended September, Pepkor’s Zimbabwean unit, which had 20 stores, reported a loss of R70 million compared with a profit of R11 million in the prior year.- Business Insider